Nampiato ny varotra ho an’i Belarosia sy Rosia ny orinasam-pitsikilovana finday Israeliana · Global Voices teny Malagasy
Voalaza fa nampiasaina hitsikilovana ireo mpanohitra mpikatroka ny fitaovan'ny Cellebrite
Voadika ny 11 Avrily 2021 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Español, عربي, русский, English
Nilaza ireo mpikatroka miaro ny zo nomerika fa ny fitaovana Cellebrite no nampiasain'ny fanjakana mampiasa hery famoretana hamoretana ny mpanohitra sy ny mpanao fihetsiketsehana. Sary avy amin'i Gerd Altmann tao amin'ny Pixabay
Noraisina ny fanapaha-kevitra taorian'ny fanambarana fa nampiasain'ny tompon'andraiki-panjakana ny teknolojian'ity orinasa ity hanenjehana sy hanaovana tsindry ny vondrona vitsy an'isa sy ny mpikatroka avy amin'ny fanoherana ao Rosia sy Belarosia, ary any Hong Kong sy Bangladesh ihany koa.
Nitatitra ny Gazety Israeliana Haaretz, izay namoaka tatitra tamin'ny Jolay 2020 nanazava ny fijirihana mampiahiahy nasehon'ireo mpikatroka ny zon'olombelona, fa nanambara ny fanovana ny politikan'ny fanondranan'ny orinasa tamin'ny 18 Martsa 2021 i Yossi Carmil, Tale Jeneralin'ny Cellebrite ary nilaza fa mba hiantohana ny fanodinana ny orinasa “araka ny lalàna sy ny fitsipika nekena iraisam-pirenena” no nanaovana izany.
Tamin'ny volana Jolay 2020, nampaneno lakolosy fanairana i Eitay Mack, mpikatroka mpiaro zon'olombelona sady mpisolovava, niaraka tamin'ireo mpikatroka mafàna fo am-polony hafa avy any Israely sy Hong Kong, tamin'ny antontan-taratasy mampifandray ny rindrambaiko nataon'ny Cellebrite amin'ny fanenjehan'ny fanjakana ny mpanohitra ara-politika, ny foko vitsy an'isa ary ny mpikatroka LGBTQI+ ary ny mpiaro ny zon'olombelona any Rosia. Nanaparitaka fanangonan-tsonia ihany koa izy ireo miantso ny orinasam-pitsikilovana nomerika mba hitsahatra amin'ny fanondranana ny fitaovany any amin'ny fanjakana mpanao famoretana. Talohan'izay dia nahavita nanery ny Cellebrite i Mack tamin'ny fampiatoana ny fivarotana ny entam-barony any amin'ireo mpitandro ny filaminana Shinoa sy any Hong Kong.
Nanao fanentanana ny mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona mba handrara ny tafika Israeliana hifandray sy hanampy ny fitondrana tsirefesimandidy.
Nolazainy tamin'ny I-Unit fa nampiasa ny tolotry ny Cellebrite i Belarosia sy Hong Kong mba ahafahana miditra amin'ny findain'ny mpanohitra.
Iray amin'ireo fitaovan'ny Cellebrite malaza indrindra ny UFED, rindrambaiko ampiasaina hidirana an-keriny sy hangalana ny angondrakitra avy amin'ny finday avo lenta. Nanambara ampahibemaso ny fampiasany matetika an'io fitaovana io taloha ny Komity mpanao Fanadihadiana ao Rosia. Nitatitra tamin'ny volana Martsa 2021 ny seha-baovao tsy miankina Rosiana MediaZona fa ny fampiasana ny UFED dia voalaza ao amin'ny antontan-taratasin'ny raharaha Lyubov Sobol, mpisolovava ao amin'ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly sady mpiara-miasa ara-politika amin'ny mpanohitra Rosiana Alexey Navalny.
Tamin'ny volana Desambra 2020, notànana i Sobol taorian'ny fikasana hitsidika ny iray tamin'ireo voalaza fa nanapoizina an'i Navalny tao an-trano. Nalain'ny tompon'andraikitra mpanao famotorana ny telefaoniny ary nikasa ny hiditra tamin'izany izy ireo. Notanana amin'ny toerana harahi-maso izy ankehitriny noho ny fihetsiketsehana goavambe ho fanohanana an'i Navalny tamin'ny volana Janoary 2021.
Nametraka tsindry bebe kokoa amin'ireo mpisehatra mpanohitra sy mpikatroka ao amin'ny firenena hatramin'ny fifidianana nampiady hevitra tamin'ny volana Aogositra 2020 ny fitondran'ny filoha Belarosiana Aliaksandr Lukashenka, ary nampiasa hery famoretana tamin'ny hetsi-bahoaka tao amin'ny firenena ihany koa.
Vakio bebe kokoa momba ny fisafotofotoana any Belarus [mg]
Na dia nolavin'ny Cellebrite aza ny fivarotana ny vahaolana [vokatra] ho an'i Belarosia dia nilaza i Mack fa nampiasa ny fitaovan'ny Cellebrite ny fitondrana Belarosiana hijirihana ny findain'ireo mpandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana voafonja. Nahita firaketana miisa 17 tao amin'ny tranonkalan'ny tsenam-panjakana Belarosiana ny tranonkalam-baovao Belarosiana momba ny teknolojia dev.by izay manondro fa nividy ny rindrambaiko UFED, nanavao ny lisansa, nahazo fanohanana ara-teknika sy tolotra hafa avy amin'ny Cellebrite ny Komity Mpanao Fanadihadiana sy ny Komitin'ny Fanadihadiana Siantifika avy amin'ny fitondrana teo anelanelan'ny taona 2013 sy 2019.
Tamin'ny herintaona, nampahafantatra ny fahaizany mitsikilo sy manara-maso ny finday tamin'ny governemanta manerantany ihany koa ny Cellebrite mba hanampy azy ireo amin'ny fanjohiana ireo [nifanerasera tamin'ny marary] ao anatin'izao valan'aretina COVID-19 izao. Nampitandrina ny mpiaro ny fiainana manokana fa mety hampiasa ny resaka krizy ara-pahasalamam-bahoaka mbola tsy nisy hatramin'izay ny fitondram-panjakana tsi-refesi-mandidy mba hanitarana bebe kokoa ny fanaraha-maso atao amin'ny olom-pirenena, ny fanangonana angondrakitra tsy nahazoana fankatoavana, ary ny fitsongoan-dia toerana [=fitadiavana ny fangitry ny toerana].
Nahita ny tatitra iray farany nataon'ny Pandemic Big Brother, hetsika iraisan'ny fikambanana mpiaro ny zo nomerika Rosiana Roskomsvoboda sy ny ivotoerana ho an'ny zon'olombelona Belarosiana Human Constanta, izay manjohy ny fepetra fanaraha-maso ny valan'aretina any amin'ny faritra, fa mety handrahona “ny fiainana manokana, ny fahafahana mivezivezy, ny fisafidianana fonenana ary ny fahalalahana mivory, ary mety hampihena ny fitokisan'ny besinimaro ireo manampahefana” ny fanaraha-maso tsy voamarina toy izany.